रम्फूका कोभिड संक्रमित ट्याक्सी चालक कहाँ रहँदै आएका थिए? - The Sikkim Chronicle
SC Desk Feb 24, 20210208
Jul 7, 2020 - 12:27
सिक्किम भित्रिने मानिसहरुलाई रम्फू स्क्रीनिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टाइनसम्म लाने काम गरिरहेका ट्याक्सी चालक गत5जुलाईको दिन कोभिड-19 पोजिटिभ पाइएका थिए। यो खबर फैलनसाथ रम्फू वरपरका मानिसहरु धेरै चिन्तित देखिएका थिए। ट्याक्सी चालकनै संक्रमित पाइएपछि तिनले अरु जनतामा पनि भाइरस फैलाए कि भन्ने आशंका सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरैले पोखेको देखियो।
स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा टी भुटियाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्। संक्रमित चालक केवल रम्फू स्क्रीनिङ सेन्टरदेखि क्वारेन्टाइसम्म मात्र मानिसहरुलाई लैजान संलग्न रहेको अनि उनको ट्याक्सीले यस अवधि अन्य कुनै मान्छे ल्याउने-लाने नगरेको भनिएको छ। उक्त चालक लगायत अन्य 13 जना चालकहरुलाई प्रशासनद्वारा निर्धारित दरमा यसै कामको निम्ति मात्र नियुक्त गरी खटाइएको बताइएको छ।
तिनीहरुलाई यस कामको निम्ति खटाइन शुरु गरेकै दिनदेखि सबैलाई एउटा रम्फूको ‘ट्रांजिट क्याम्प’ (होटल)मा अलग्गै राखिएको बताइएको छ। पूर्व सिक्किमकी डीएसओ डा. छिरिङ भुटियाले प्रशासनद्वारा खटाइएका सबै 14 वटै गाड़ीलाई मानिसहरु क्वारेन्टाइसम्म पुर्याए लगत्तै हरेक पल्ट सेनिटाइज गरिने गरेको जानकारी दिएकी छन्।
उल्लेखित चालकले सिक्किम फर्किएको एक व्यक्तिलाई रम्फू स्क्रीनिङ सेन्टरदेखि हिमालयन फार्मेसी बोइज होस्टल क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याएका थिए। सो यात्री गत3जूनको दिन संक्रमित पाइएपछि चालकको पनि नमूना जाँच गर्दा तिनी संक्रमित पाइएका हुन्। सोही दिन अन्य दुई चालकहरुले पनि सो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मानिसहरु पुर्याएका थिए। ती दुई चालक भने कोभिड-19 नेगेटिभ पाइएका छन्।
यसको साथै संक्रमित चालकको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग तुरन्तै गरिएको अनि दुई अन्य चालकहरु तिनको सम्पर्कमा आएको पाइएपछि तिनीहरुलाई पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा सारिएको छ। संक्रमित चालककी पत्नी अनि नानी दुवैलाई पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा सारिएको बताइएको छ। तिनीहरु सबैको नमुना जाँच7जुलाईमा गरिने भनिएको छ। संक्रमित चालक रहँदै आएका ‘ट्रांजिट क्याम्प’ होटलमा रहेका अन्य 11 चालकहरुको पनि7जुलाईकै दिन नमुना जाँच गरिने बताइएको छ।
गत5जुलाईको दिन संक्रमित पाइएका सशस्त्र सिमा बलका 20 जवानहरुबारे बोल्दै डा. पेम्पाले कुल 64 जवानहरुको जाँच गर्दा 20 जना संक्रमित पाइएको बताए। तीमध्ये नेगेटिभ आएका 44 जवानहरुको नेगेटिभ रिपोर्ट सुनिश्चित गर्न7दिनपछि पुन: नमुना जाँच गरिने जानकारी दिए। तबसम्म 44 जनालाईनै क्याम्प-क्वारेन्टाइनमा राखिने थप जानकारी स्वास्थ्य सचिवले गराएका हुन्।
5 जुलाईकै दिन संक्रमित पाइएका अर्का एक व्यक्ति दिल्लाबाट सिक्किम भित्रिएका हुन्। तिनीसँग अन्य 11 जनाले यात्रा गरेको अनि तिनी गान्तोकको एउटा पेड क्वारेन्टाइनमा रहँदै गरेको जानकारी गराइएको छ। सो होटलमा4अन्य व्यक्तिहरु पनि रहेको बताइएको छ। सो कोभिड-19 संक्रमितसँग सोझै सम्पर्कमा आएका 15 जनाको यथाशीघ्र जाँच गरिने जानकारी स्वास्थय सचिवले दिएका छन्।
6 जुलाईसम्म सिक्किममा सक्रिय कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 47 रहेको छ। 65 जना अगावै निको भएर अस्पतालबाट छुट्टी पाइ होम क्वारेन्टाइनको निम्ति आ—आफ्ना घर गइसकेका छन्। 13 जना सिक्किम बाहिर गएका छन्।
Bimal Thapa Jun 16, 20200466
Bimal Thapa Oct 6, 20200403
Bimal Thapa Jul 18, 20200537
Bimal Thapa Sep 9, 20200364
Bimal Thapa Jul 18, 20200402
Bimal Thapa Sep 16, 202001141
SC Desk Feb 24, 20210214
admin Oct 6, 20200205
SC Desk Jul 11, 20200200
admin Jul 10, 20200163
SC Desk Feb 3, 20200259
Shradha R. Chhetri Oct 17, 20200342
SC Desk Feb 13, 20200263
SC Desk Feb 28, 20200365
admin Jul 22, 20200336
SC Desk Nov 24, 20200585